Ahoana ny fametrahana ny macOS Sierra beta nefa tsy mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana ny macOS Sierra beta nefa tsy mpamorona
Ny fahatongavan'ilay macOS Sierra vaovao sy ireo zava-baovao amin'ny endrika Siri, ny app Photo nohavaozina, Auto Unlock, clipboard ary ny sisa amin'ny vaovao, ny "hype" amin'ny fametrahana an'ity kinova vaovao ity amin'ny Mac azy dia natsangan'ny mpampiasa maro. Ny marina ary hita mangatsiaka, amin'ity volana ho avy ity isika dia hanana ny programa beta ho an'ny daholobe ahafahantsika mametraka ny kinova voalohany amin'ny rafitra fiasa amin'ny Mac ary miaraka amin'ny sisa amin'ireo beta ho an'ny iOS 10 sy watchOS, hanomezana fahafaham-po ny faniriana ny vaovao efa napetraka.
Nefa misy safidy maromaro izay avelao ny mpampiasa hametraka ny betas na dia tsy manana kaonty developer aza. Izany dia azo atao amin'ny fitaovana Apple rehetra na dia amin'ny Mac aza. Alohan'ny handefasana ity beta ity ho an'ny mpamorona macOS Sierra, vakio tsara ity fampianarana ity ary aza mitsambikina ao raha tsy manana traikefa betsaka amin'ireo lohahevitra ireo ianao.
Tokony hazavaina fa kinova beta ho an'ny mpamorona ary noho izany dia mety ho marin-toerana izy io ary tsy mifanaraka amin'ny sasany amin'ireo rindranasa izay ampiasaintsika isan'andro. Ka ny tena antony voalohany dia ny hitazonana ity kinova tsy ho eo amin'ny rafitra fiasantsika, ity dia ny OS X El Capitan 10.11.5. Nodiovina izany, andao hidina amin'ny orinasa isika.
1 Fampidinana MacOS Sierra
2 Diskmakerx dia ilaina
3 Mamorona ny installer ary apetraho macOS Sierra
Fampidinana MacOS Sierra
Tsy isalasalana fa io no dingana lehibe indrindra ary mazava ho azy fa tsy afaka mamela ny rohy fampidinana amin'ny tranonkala isika, fa raha mikaroka ao amin'ny Google isika dia hahita azy. Alohan'ny fampidinana izay zavatra tokony hataontsika dia ny fampiasana saina mahazatra, ny fitandremana ny toerana ahazoantsika ilay rindrambaiko dia hisoroka ny olana amin'ny fametrahana manaraka. Tsy ny rohy rehetra no tsara, jereo.
Diskmakerx dia ilaina
Ity fitaovana ity dia olom-pantatra taloha.
Ho an'ity fomba fametrahana ity izay atoroko manokana ary mifototra amin'izany mamorona fizarazarana vaovao amin'ny kapila (na io no lehibe indrindra na any ivelany) dia mila an'ity fitaovana ity isika. Ny zavatra ataon'ny Diskmakerx dia mamorona installer USB ary noho izany dia mila maka a stick USB 8GB farafahakeliny ary apetraho amin'ny OS X Plus (Journaled) avy amin'ilay fitaovana Fitaovana kapila.
Azonao atao ny mahazo ity fitaovana ity amin'ny anao tranokala manokana raha tsy manana izany amin'ny Mac-nao amin'ny fotoana hafa. Ny antsipiriany iray lehibe dia ilay fitaovana tsy mamaritra hoe vonona ho an'ny macOS Sierra izy, Avy amin'ny OS X El Capitan izy io, saingy manamafy aho fa mitovy ihany ny asany.
Mamorona ny installer ary apetraho macOS Sierra
Ny ambiny dia tena tsotra ary miaraka amin'ny fanampian'ny Diskmakerx dia tsotra be izy io. Manokatra Dismakerx izahay ary miaraka amin'ny USB mifandray amin'ny Mac dia tsindrio ny safidin'ny mametraka OS X El Capitan, mandeha tsara ary misafidy amin'ny fisintomana macOS Sierra teo aloha izahay, izay ho toerana nitahianay azy teo aloha.
Na eo aza ny fisian'ny endrika USB, rehefa hampiditra ilay macOS Sierra efa nalaintsika teo aloha isika dia mangataka antsika hanao endrika ary rehefa vita dia tsy maintsy mametraka ny teny miafin'ny mpandrindra fotsiny isika tohizo ny gazety. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry ny fizotry ny fametrahana ao anaty USB 8GB isika raha mangina kely dia ara-dalàna izany. Na ahoana na ahoana dia hanakatona ny programa isika, hanapaka ny USB na hamono ireo fitaovana. Vantany vao vita misy hafatra diso mety hiseho fa tsy misy olana, afaka manomboka ny fametrahana dingana amin'ny masininay.
Tsotra ny fametrahana ary raha vantany vao vita ny fizotran'ny DiskMaker X dia afaka mandeha any amin'ny fametrahana amin'ny Mac. Mba hanombohana ny fizotrany dia tsotra toy ny famonoana Mac miaraka amin'ny USB mifandray ary amin'ny fotoana hanombohana fotsiny tazoninay ny lakilen'ny Alt Mba hiseho ny menio fanombohana dia mifidy ny fahatsiarovana USB izay ananantsika ny mpiorina maOS Sierra ary tsindrio.
Safidy iray hafa izay azo ampiasaina hanombohana ny installer Rehefa tapitra ny fizotrany dia misafidy amin'ny System Preferences> Boot Disk isika, eto no isehoan'ny MacOS Sierra installer ary manindry eo dia manomboka ny fizotrany.
Tadidio indray Io no kinova beta voalohany an'ny rafitra fiasa Mac ary na dia toa tsy mampiseho olana lehibe na hadisoana aza izany dia tsara foana ny miandry ny kinova farany an'ny rafitra fiasa hamoaka fanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Ahoana ny fametrahana ny macOS Sierra beta nefa tsy mpamorona
isramadrigal dia hoy izy:
Nisy nanandrana ve? Manao ahoana ny marin-toerana sns ...?
Amin'ny ankapobeny dia mizaha toetra azy aho hatramin'ny omaly ary milamina tsara izy io. Amin'izao fotoana izao aho dia mamaly anao amin'ny fizarazaran'i macOS Sierra fa mila fotoana bebe kokoa aho hilazana raha milamina izany na tsia ...
Gabriel Arenas Torres dia hoy izy:
Misy fomba hafa hametrahana azy ve raha tsy misy tsora-kazo USB?
Valiny tamin'i Gabriel Arenas Torres
Raha misy safidy hafa hametrahana azy, ny iray amin'izy ireo dia amin'ny alàlan'ny terminal fa mila stick USB koa ianao 🙂
Ok misaotra, rehefa dinihina fa efa manana ny USB aho, io ve no fomba mety hametrahana azy amin'ny rangotra?
Mandao ny Flash hatrany amin'ny macOS Sierra i Safari
Ahoana ny fametrahana iOS 10 beta nefa tsy mpamorona